China Palmitoyl Tetrapeptide-7 sy ny orinasa mpanamboatra | JYMed
Čas No .: 221227-05-0
Molekiolan'ny Formula: C34H62N8O7
Molekiolan'ny Weight: 694,919 g / Rol
Applications: Relief mety mamaivay ny hoditra, tandremo ny hoditra salama
Palmitoyl tetrapeptide-7 dia tandindon 'synthetic peptide iombonana amin'ny izay Mitambatra gadra maro ny asidra amine mba hampihenana ny hoditra mamaivay sy ny fahasimbana miaraka hoditra. Io ihany koa peptide iombonana amin'ny mino mba hampirisihana ny fahaterahana indray ny collagen ny tsiratsiraky ny dermis amin'ny alalan'ny miasa ho toy ny karazana finday mpitondra hafatra. Palmitoyl tetrapeptide-7 dia heverina fa hampitombo koa ny habetsaky ny hyaluronic asidra eo amin'ny hoditra, izay afaka manampy hanenjanana kokoa hoditra amin'ny hisarihana hamandoana ny epiderme. Na dia ny akora simika dia heverina ho azo antoka fa ampiasaina amin'ny fikarakarana hoditra, ny ingredient ny fahaizany andravana hoditra loko mety hitarika ho amin'ny hoditra discoloration olana. Raha toa ianao mikasa ny hametraka vokatra amin'ny palmitoyl tetrapeptide-7 ny hoditra fikarakarana ny vokatra, hanao izany tsikelikely, ary kokoa eo ambany ny fikarakarana ny hoditra.
Palmitoyl tetrapeptide-7 dia heverina ho tsaratsara kokoa noho ny fananana ampiasaina amin'ny tarehy vokatra noho ny fahafahana miditra hoditra sy hanafaka hafa manohitra ny fahanterana fangaron lalina an hoditra tambatsela. Ny kalitaon'ny solubility amin'ny diloilo no mahatonga azy ho tonga lafatra ny safidy sy voafintina amin'ny mahazatra Kamban-teny ampiasaina amin'ny dermatological vokatra indrindra manohitra fahanterana vokatra, satria ny mixtures no mety hijanona homogenous. Mba hahazoana ny tatitra feno manodidina toxicological olana, mety ho vokany ela noho ny fampiasana sy ny anton-javatra hafa, io palmitoyl tetrapeptide-7 dia atolotra eo ambany an-tsitrapo Cosmetic Registration Program tamin'ny 2012 ho an'ny FDA fankatoavana.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny fikambanana sy levonina hifantoka tanteraka fanjakana-avy-ny-kanto koa teknolojia ao an-trano sy tany ivelany. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasa tehina ekipana manam-pahaizana voatokana manoloana ny fitomboan'ny goavana Fifantenana for Cosmetic Peptide / Beauty Peptide Palmitoyl Tetrapeptide-7 / palmitoyl Tetrapeptide čas 221227-05-0: Tsy misy mitondra vahaolana efatra izao. Ny vokatra mahomby indrindra tsy namidy nandritra ny tsena Shinoa, fa nandray ihany koa nandritra ny orinasa iraisam-pirenena.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny fikambanana sy levonina hifantoka tanteraka fanjakana-avy-ny-kanto koa teknolojia ao an-trano sy tany ivelany. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasa tehina ekipana manam-pahaizana voatokana manoloana ny fitomboan'ny Palmitoyl Tetrapeptide-7, čas 221227-05-0, Palmitoyl Tetrapeptide-3, toy ny mpanamboatra za-draharaha izahay koa dia mba manaiky namboarina ary mety hahatonga azy io toy ny sary na ny santionany famaritana. Ny tena tanjona izay namanay dia ny hiaina ny fahatsiarovana azy tsy mahafa-po ny mpanjifa rehetra, ary hanorina ny raharaham-barotra mandritra ny fotoana maharitra fifandraisana amin'ny mpividy sy ny mpampiasa manerana izao tontolo izao.